Afrika ha eegto hillaaca rajada
Waxaa la yidhi “Nin buka boqol u talisay”. Waxaa malaha sidaas ka dhigan qaaradda weyn ee Afrika. Waa qaarad aanay inta badan taladeedu dadkeeda gacanta ugu wada jirin. Waa qaarad ugu dhowaan afartankii sano ee u dambeeyay ilaa hadda ay dadkeedu ku sugan yihiin nolol hoosaysa. Si ay geeddiga nololeed hore ugu waddo waxay u baahan tahay aqoon iyo dhaqan aqooneed dhab ah oo shaqayn kara.
Gabay uu tiriyey Shawqi, abwaan carbeed, oo qoraal lagu hayo ayaa waxaa ku cad in uu qaaradda Afrika ku metelay sida xidhmo cinab ah oo biyo aad u dhannaan ku dhexjirta oo kale. Waxa uu yidhi: “ Maxaa biyahaa ka dhannaan, maxaase cinabka ku jira ka macaan?”. Innagu waxaynu leenahay: Afrika yaa ka khayraad badan, dadkeedase yaa ka saboolsan?!
Afrika dad badan oo cid kastaba leh ayaa wax ka qoray, waxaanse horraantii bishii tagtay ee Febraayo dhegaystay macluumaad ku jiray dhigane ama buug la akhriyey oo uu qoray Robert Guest, warfidiyeen Afrika aad u darsay. Buuggaasi waxa uu ku tilmaannaa, “Qaaradda seetaysan: awood, musuqmaasuq iyo nolol Afrikaan”, waxana akhriyey Naadiga Akhristayaasha. Haddii ereyga “seeto” la yidhaa waxaa jiri kara xoogaa fakaansi ama dhaqdhaqaaq ah, laakiin dabarku waa jiq. Waxa uu ahaa buug ama dhigane aad u xiiso badan.
Waxaa mawduuca buugga si toos ah ama si dadbanba ula xidhiidhi karay weydiimaha, “ Maxaa Afrika saboolnimada ugu wacan? Maxay in badan oo qarammadeeda ka mid ahi had iyo jeer ugu jiraan xaalado dagaal? Muxuu cudurka dilaaga ah ee AIDS faro baas ugu hayaa meelaha qaar? Maxaa iskaashatooyinka ama dadkeeda wada hawlaha ganacsi ku adkeeyay in ay helaan ‘deyn lacageed’?...” Laakiin aynu halkaa innagu mid ku dhignee, maxaa looga gol leeyahay deynta la siiyo dalalka Afrika qaar ka mid ah? Ma daawaa mise waa dab?
Had iyo jeer waxaa laga yaabaa ama dhici kartaba in ay kala duwanaadaan dhibaatooyinka Afrika sida ay dadweynaha qaaraddu u arkaan iyo sida uu shisheeyuhu u arkaa. Taasi runtii layaab ma laha, waayo dadka iniba meel ayey ka duushaa, si na wax bay u eegtaa.
Waxaa taariikhda lagu hayaa in ay dadweynaha qaaradda dhibaatooyin badani kaga yimaaddeen dhanka shisheeyaha, oo maanta waxaa qoran addoonsigii arxandarrada ahaa ee beri fog dhacay, qaybsashadii qaaradda, gumaysigii iyo isku soofayntii qaar ka mid ah qarammada Afrika xornimadii ka dib. Waxa kale oo jira qorshayaasha shirkadaha waaweyn ee casriga ah ee xilligan iyo siyaasado kale oo aad mooddo in aanay dheelli-tirnayn.
Waxaa dhinaca kalena ina hor taal xaqiiqo kale: waa gumaadka, dilka, dhaca iyo dhibaatooyinka ay isu geystaan dadweynaha reer Afrika qudhoodu. Dhibaatooyinka dhanka shisheeyaha loo tiriyo waxa malaha, sida ay ila tahay, ka badan kuwa ay reer Afrika isu geysteen ama isu geystaan.
Haddaba xaqiiqada dibudhaca Afrika labadaa arrimood ayey ku dhex jirtaa. Laakiin dhibaatooyinkaasi marmarsiinyo uma noqon karaan in ay reer Afrika ahaadaan sida ay maanta yihiin. Adduunka kaleba waxa ka jira qaarado ama ummado mushkilado badan soo maray, oo haddana maanta meel iska soo saaray, nolol lagu soo hiran karana haysta.
Dadweynaha reer Afrika waa looga wanaagsan yahay in ay qarnigoo labaatan dhaafay sheekooyinkooda oo dhami noqdaan “wax baa nalagu caawiyey”, “waxbaa nala yeelay”, “dawlad heblaayo ayaa dan innaga leh oo horumar baynu gaadhaynaa” iyo wixii la mid ah. Waxaasi waa aragti-xumo weyn oo ay aqoondarro ka muuqato. Waxay muujinaysaa in aanay reer Afrika aqoonsanayn wanaag kasta oo ay iyagu qabsan karaan qiimihiisa, iyo dhib kasta oo ay isu geystaan waxyeelladeeda. Wax walba waxaa kala weyn wax yar oo ay dad shisheeye ahi sameeyaan.
Haddii uu qof qaaradda u dhashay dalkiisa ugu deeqo $ 10,000 wax weyn looma arkayo. Laakiin haddii ay hay’ad yar oo shisheeye ahi meel ku beerto dhawr geed oo ubax ah ama qol yar dhisto waxaa loo arkayaa guul weyn oo soo hoyatay oo aan la gaadhi kareen, waxana loo difaacayaa hay’addaa, haddii shaki yimaaddo, si aan loo difaaceen hantida muwaaddinkii dalkiisa deeqda weyn u fidiyey, maxaa yeelay waa hay’ad.
Macnaha hadalkani ma aha in la iska daayo waxqabadka hay’adaha ama shisheeyaha laga heli karo, ee waa in horta la isku kalsoonaadaa, oo haynta iyo kartida la leeyahay lagu qancaa. Markaa ka dibna waa in dadka shisheeyaha ah ama hay’aha wax lala qabsan karo la soo dhoweeyaa, oo si sharaf leh wixii dan ah loo wada qabsadaa. In xarragada la ilaaliyaa waa wax aad iyo aad u fiican.
“War la qabaa xiiso ma laha” ayey dadkeennu ku maahmaahaan, waxana sidaa ka dhigan arrimaha Afrika oo aynu dhammaanteen ka wada warqabno. Ma jiro malaha qof qaangaadh ah oo aan garanayn waxa ay Afrika u baahan tahay. Sidaas oo ay tahay haddana ujeeddadeennu waa uun xasuusin kooban.
Haddii hadalka la soo ururiyo dadweynaha qaaraddu waxa ay u baahan yihiin aqoon garasho wadata, caddaalad iyo talo hagaagsan. Saddexdaa arrimood ayaa keeni in saboolnimada, colaadaha iyo dhibaatooyinka laga baxo oo nolol fiican la helo. Arrimahaas ayaa keeni kara talo fiican oo wax kasta oo wanaag ah lagu qabsan karo. Sow sidaas ma aha?
Bal imikana aynu dhuuxno macnaha tixahan soo socda:
“Tabantaabadeey laba Gacmood tamar ku yeeshaane
Tiska waxaa la qaadaa markay tiirisaa bidixe
Hadday midigtu keli taagan tahay tahar ma goyseene
Rag tashaday dhul way toli karaan, taako labadeede”
“Midigtaadu waxay xoogsataa maydha kaa jara e’”
“Axadkii kaslaan ahi sabool abidki weeyaane’”
Xaaji Aadan Axmed Afqallooc
“Tab uu laaskaaga ku dhurtiyo tuugo nin u jeeda
Hurduu kugu talaaliye ileen toos ku odhan maayo”
Cabdillaahi Macallin Dhoodaan